Tema Morsmål - Dhibaatooyinka ay kala kulmaan caruurta iyo waalidku qaxootinimada
Written on 22. august 2016 . Posted in Sharciga xanaanada Barnehageloven
Samaynta ay ay qoysaska ku leedahay nolasha cusub ee Norway.Xanaanooyinka caruurtu waxa ay qaabilaan caruur iyo waalidiin ku cusub wadankan oo nolol cusub ka bilaabaya.Haddaba qoysaskan waxa ay ka soo badbaadeen oo ay la soo darseen dhibaatooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin iyaga oo waayey wixii ay hanti lahaayeeen iyo waliba qaar ka mid ihi ay ehel badan ku waayeen. Isla markaa waxa ay qoysas badani ku faraxsan yihiin nolashan cusub ee ay ku yimaadeen Norway.
In aad ka qaxdo wadankaaga oo aad u qaxdo waddan kale arrin fudud maaha,dhibaatooyinkiisana wuu leeyahay.Wax yaabaha qofku u baahdo waxaa ka mid ah i uu bartu luuqad cusub iyo dhaqan cusub oo ka duwan kiisii hore.Waaldku waxa kale oo ay u baahanyihiin in ay guri,waxbarash cusub, shaqo iyo is dhex gal bulsho helaan. Caruurta yaryar ee daàdoodu 6 sano ka yartahay waxa ay u baahanyihiin in la geeyo xanaanada caruurta,halkaas oo ay u baahan yihiin in la fahmo iyo in la baro afka cusub iyo in ay helaan saaxiibo ay la ciyaaraan.
Xanaanooyinku waa in ay u fidiyaan caawimo caruurta. Waalidiintu waxa ay xaq u leeyihiin in ay caruurtooda ku barbaariyaan dhaqankooda iyaga oo isla markaa waafajinayaa bulshadan cusub ee ay ku soo biireen.,taas oo qaar ka mid ah waalidiintu aanay si sahlan uga gudbi karin.Haddaba talaabo talaabo ayay ula jaanqaadi karaan mujtamaca cusub.Xanaanooyinku waxa ay ku leeyihiin kaalin muhiim ah in ay taageero u fidiyaan caruurta iyo waalidkood si ay uga gudbi lahaayeen marxaladdan ku cusub.
Halkan kasii akhri qodobka
Waxaad halkanna kasii akhridaa sida ay degmooyinka,dugsiyada iyo xanaanooyinkuba u caawin lahaayeen,boggan ay inoo diyaarisay hayadda NAFO her.